Fivorian'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Zandarimariam-pirenena | Primature
Fivorian’ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Zandarimariam-pirenena
Mahazoarivo, ny 9 marta 2020 – Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fivorian’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarmariam-pirenena ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, io maraina io.
Fivoriana nasionaly, eo ambany fiadidian’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmariam-pirenena, maharitra roa andro, izay anaovana jery todika ny asa vita nandritra ny taona lasa sy ibanjinana ny mbola lesoka harenina amin’ny hoavy, ary entina hanatsarana sy hanamafisana ny anjara birikin’ny zandarimariam-pirenena eo amin’ny sehatry ny fiarovanam-pirenena anatiny sy ny fahametrahana ny fandriampahalemana. Notronin’ny minisitry ny Fitsarana, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ary ny solontenan’ny minisitry ny Filaminana Anatiny izay miara-misalahy eo amin’ny fitandroana ny filaminana moa izany fivoriana izany.
Nanambara ny Praiminisitra fa miankina amin’ny fisian’ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ny fahafahana miroso amin’ny zotram-papandrosoana ny firenena.
Hita taratra izany eny anivon’ny fahafahan’ny isambatan’olona manatanteraka ny asany andavan’andro, sy mamokatra an-kalalahana ao anaty fitoniana tanteraka.
Raha ny eny amin’ny tontolo ambanivohitra manokana no jerena dia tsapa mantsy fa ny vokatra azo avy amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana no antony voalohany anafihan’ireo dahalo ny vahoaka ka tsy maintsy tohizana ny fanatanterahana ny ezaka izay efa natao amin’ny famerenana ao anatin’ny fotoana fohy ny fahandriampahalemana manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara, hoy izy. Nohazavainy fa izany no anton’ny fidinana ifotiny ataon’ny Lehiben’ny governemanta any amin’ireny toerana izay voasokajy ho faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ireny, ka mba hamerenana indray ny fahatokisan’ny vahoaka ny rafitra sy fahefam-panjakana any an-toerana izay miantoka ny fiarovana ny ainy sy ny fananany.
Ny fandrosoana mantsy hoy hatrany ny Praiminisitra, dia ny fitambaran’ny ezaky ny tsirairay hizaka tena amin’ny asam-pamokarana ataony ary atosiky ny zotram-pampandrosoana ; ka miteraka fahafahana mampivoatra ny fokontany, ny kaominina, ny distrika sy ny faritra misy azy, saingy tsy ho tanteraka izany raha tsy ao anaty tontolo milamina sy mandry fahalemana.
Nambarany ihany koa fa nandritra izay herintaona izay dia tsapa fa efa miatomboka miverina tsikelikely ny fahatokisan’ny vahoaka ny fahefam-panjakana amin’ny ireo mpitandro ny filaminana, ny lafin-tany, ary ny fitsarana any amin’ny ireny faritra mena ireny, izay efa nanantanterahany fidinana ifotony. Voamarina izany tamin’ny nahafahan’ny mpitandro ny filaminana namerina ny omby voaroba tamin’ny tompony, ny fandravana ny kizo fiheren’ny dahalo, ary ny fahafahan’ny vahoaka mihary am-pitoniana. Mbola mitohy moa ankehitriny, izany ezaka tarihan’ny Lehiben’ny governemanta izany, ka hiompana amin’ny famakian’ireo mpitandro ny filaminana ny lalana rehetra fanaovana varo-maizina samihafa mifandraika amin’ny rongony sy ny zava-mahadomelina.
Mikasika ny Zandarmaria manokana dia nanambara ny Praiminisitra fa ilàna paik’ady ny fitazomana ny fahombiazana azo tao anatin’ireny “operations” isan-karazany, izay iarahana misalahy amin’ny tafika sy ny polisim-pirenena ireny, nefa ny tanjona hoy izy dia ny tsy hisian’ny faritra voasokajy ho mena intsony eto Madagasikara, satria izany no antoky ny fampandrosoana.
Nankasitraka ny fanavozana natao teo anivon’ny Zandarmaria moa ny Praiminisitra. Isan’izany ny teo amin’ny fametrahana ny CSAO na ny “Centres Spéciaux d’Aguerrissement Opérationnel” amin’ny toerana maro, izay ahafahan’ireo avy nanaraka fiofanana maka traikefa sy manamafy ny fahaizana norantoviny ao anatin’ny sehatry ny fandriampahalemana. Toa izany koa ny fametrahana ny BRS na ny “Brigade Routière Speciale” amin’ny alalan’ny fametrahana “Aire de Repos Sécurisée” isaky ny 100 kilometatra, mba hahafahana mifehy ny asan-dahalo sy ny fanafihana mitranga amin’ny lalam-pirenena. Eo koa ny fametrahana ny “Brigade Anti-kidnapping” entina miady amin’ny asa fakàna olona an-keriny ; ny fanaraha-maso ny fahazoan-dalana mitàna sy mitondra basy izay voasokajy ao anatin’ny “arme de guerre”, sy ny fanesorana izany eo am-pelan-tanan’ireo tsy mara-dalàna. Ao amin’ny faritra amoron’i Mania sy Matsiatra Ambony moa no nahitana izany fa mbola be ihany koa ny ezaka hatao amin’ny famerenana ny basy any amin’ny faritra atsimon’ny nosy toa an’ Anosy, Androy, Atsimo Andrefana ary Atsimo Atsinanana; ka ilàna fomba fiasa vaovao mba hahafahana mifehy tanteraka ny basy eto Madagaskara.
Anisan’ny ezaka natao teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena koa ny ady atao amin’ny kolikoly, amin’ny alalan’ny fanovàna ny toen-tsaina hoentin’izy ireo manantanteraka ny asany. Entanina ny fifandraisana misy eo anivon’ireo sampan-draharahan’ny fitsàrana toy ny mpitsara mpanao famotorana sy ireo mpanao famotorana sy savaranon’ando na ny “officier de police judiciaire”, izay ao anatin’ny paik’ady hanenjehana ny mpanao ratsy. Tsy tokony ho ampiasaina hanaovana kolikoly sy hampitahorana ireo vahoaka amin’ny fanagadràna anefa izany. Noho izany dia ho ampiana ny mpitandro ny filaminana izay tena manao ny asany atsakany sy andavany ary mijoro amin’ny fahamarinana manoloana ireo olon-dratsy mivelona amin’ny tsy ara-dalàna ka misakana ny tsy hiharan’ny lalàna amin’ny tokony ho izy; tsy handeferana kosa noho izany ny firaisana tsikombakomba. Tsara ny mampahafantatra fa anisan’ny ezaka hotanterahina eo anivon’ny Ministeran’ny fitsarana ny fanoloana ireo mpitsara izay mitana andraikitra mihaotra ny dimy taona.
Anisany nasongadinin’ny Praiminisitra ihany koa, nandritra izao fivoriana izao, ny ezaka amin’ny mbola tsy maintsy hitadiavana vahaolana sy paik’ady mazava mifehy ny halatra taolam-paty sy ny tambazotra fangalarana lavanila izay iankinan’ny ain-dehiben’ny firenena. Eo ihany koa ny tokony hijezana vaholana ny amin’ny firongatry ny fanafihana ireny “cash point” ireny, izay nahazo vahana tato ho ato, sy ny gaboraraka misy amin’ny fampiasana “scooter” ka lasa fitaovana ampiasain’ireo jiolahy amin’ny fanafihana maro samihafa.
Hizara kaomisiona maromaro moa ireto manamboninahitra eo anivon’ny zandarmariam-pirenena ireto mandritra izao fivoriana izao, handinika ny fomba hahitana paik’ady hoentina hanantaterahana ny torimarika avy amin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta.
← Faha-60 taona ENAM sy taom-pianarana 2020-2022
Visite de courtoisie →
Fitsidihana ny faritra Atsimon’I Madagasikara